February 14, 2021 - Padaethar
မိန်းကလေးတိုင်း ချစ်သူဆီက ကြားချင်တဲ့ စကား (၈) ခွန်း
အလိုက်သိစွာ ပြောစေ၊ လုပ်စေချင်တဲ့ အရာတွေ ဖြစ်ပါတယ်။ မိန်းကလေးတွေရဲ့ ရင်ထဲမှာ ချစ်သူရဲ့ အလိုက်တသိ ပြုလုပ်တဲ့ အပြုအမူလေးတွေနဲ့ ပြောစကားလေးတွေကို အမြဲလိုချင်တာလေးတွေ ရှိပါတယ်။ ၁။ ဟင်းချက်ပေးမယ် ကိုယ်က ဘယ်လောက်ပဲ ဟင်းချက်ကောင်းပါစေ၊ ယောက်ျားလေးတစ်ယောက် ဟင်းချက်နေတာလောက် ချစ်စရာကောင်းတာ မရှိပါဘူး။ ၂။ ဒီပိတ်ရက်မှာ ကိုယ်တို့နှစ်ယောက်အတွက် အစီအစဉ်လေးတွေ လုပ်ထားတယ် များသောအားဖြင့် ဘာလုပ်မယ်၊ ဘယ်သွားမယ်ဆိုတာ မိန်းကလေးတွေကသာ ပြောဆို ပူဆာရတာပါ။ ဒါပေမဲ့ ချစ်သူက အရာရာစီစဉ်ထားပေးတယ်ဆိုတာမျိုးက မိန်းကလေးတွေရဲ့ရင်ထဲမှာ အမြဲတောင့်တတဲ့အရာပါ။ ၃။ မင်းမှန်ပါတယ် ယောက်ျားတစ်ယောက်အတွက် မှားတယ်လို့ ဝန်ခံရတာ အခက်ခဲဆုံးအရာတစ်ခုပါ။ ဒါပေမဲ့ မှားတာကို မှားတယ်လို့ ဝန်ခံစေချင်တာ မိန်းကလေးတွေရဲ့ ဆန္ဒပါ။ ၄။ တောင်းပန်ပါတယ် မိန်းကလေးတွေက နှလုံးသားနူးညံ့ပါတယ်။ … Read more
လူတစ်ယောက် အထူးသဖြင့် ကိုယ့်ချစ်သူက ကိုယ့်ကို လွမ်းနေ၊သ တိရနေတာမျိုးကို မလိုချင်တဲ့သူမရှိပါဘူး။တစ်ချို့ ကိစ္စတွေဟာ ဒီတိုင်း သမရိုးကျနည်းအတိုင်း သွားတာထက် နည်း နည်းလေးဉာဏ် များပေး ဖို့ လိုပါတယ်..။ သူ့ကိုယ့်အကြောင်း မစဉ်း စားပဲ မနေနိုင်ပဲ လွမ်းနေအောင် လုပ်လို့ရတဲ့ နည်းတွေရှိပါတယ်နော်.. (၁) ငြင်းပါ…. လူတော်တော်များများက ခက်ခဲတာကိုမှ ပိုကြိုက်ပါတယ်။လူ တိုင်း ကတော့ ကိုယ်ချစ်တဲ့ သူနဲ့အတူရှိချင်ကြသူတွေပါ။တွေ့မယ် ချိန်း လို က်တိုင်း ငေါက်ခနဲ ထထိုင်ပြီး ဖြစ်နေတာမျိုး မလုပ်ပါနဲ့..၊ အမျိုး သမီးေ တာ်ေ တ်ာများများက ချစ်သူကချိန်းလိုက်ပြီဆိုရင် မအားတာေ တာင်မှ အချိန်ဇယားတွေကို ရွှေ့ပြီး တွေ့ဖို့ အရောက်သွားသူတွေပါ။ကိုယ်က ချစ်လို့ ဒီလို လုပ်တာဆိုပေမယ့် သူကဒီလိုမြင်မှာမဟုတ်ပါဘူး..။ ဒါေ … Read more
ချစ်သူများနေ့ Valentine’s Day နေ့ရဲ့ နောက်ကွယ်က ဆိုးကျိုးတွေ ကပ်ပါလာနိုင်တယ်ဆိုတာ သတိထားမိကြရဲ့လား
Valentine’s Day ဆိုတာ ချစ်ရသူများအတွက်နေ့ဆိုတဲ့အတိုင်း နိုင်ငံတိုင်းလိုလိုမှာတော့ ချစ်သူစုံတွဲတွေဟာ တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် ဒီနေ့ကျမှ ချစ်ပြကြ၊ လက်ဆောင်တွေပေးကြနဲ့ ရိုလို့မဆုံးဖြစ်နေကြပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ Valentine’s Day ကို ကျင်းပကြတဲ့ အတွဲတွေနောက်ကွယ်မှာ ဆိုးကျိုးတွေ ကပ်ပါလာနိုင်တယ်ဆိုတာ သတိထားမိကြရဲ့လား။ (၁) ပိုက်ဆံအိတ်လေးကို သတ်နေတာပဲ Valentine’s Day ဆိုတာနဲ့တင်ကို ချောကလတ်ဝယ်ကျွေးရ၊ ဘာပစ္စည်းပေးရ၊ ညာပစ္စည်းပေးရ၊ romantic dinner စားရနဲ့။ ချဲ့ရင် ချဲ့သလောက်ကုန်တယ်ဆိုတာ ဒီ Valentine’s Day လည်း ပါနေပါတယ်။ လူတွေရဲ့ မသိစိတ်က ယှဉ်ပြိုင်မှုတွေကြောင့် ပါချီပါချက်လက်ဆောင်ပေးပြန်ရင်လည်း အဆင်မပြေပြန်တော့ ပိုက်ဆံကထွက်ပြီလေ။ ဒီတစ်နေ့လေးအတွက် ကုန်မယ့်ပိုက်ဆံတွေေကို နှစ်ယောက်သား ဆိုင်ကောင်းကောင်းမှာ မုန့်တွေလျှောက်စားပစ်လိုက်ပါလား။ အောက်မှာ ပြထားတဲ့ chart ကတော့ (၂၀၁၃)ကနေ … Read more
ရည်းစားအနေနဲ့တောင် မရွေးချယ်သင့်တဲ့ ယောက်ျားတွေရဲ့ အကျင့်စရိုက်(၅)မျိုး
တစ်စုံတစ်ယောက်က သင့်ကိုအရမ်းလွမ်းနေမှန်းသိနိုင်မယ့် ထူးထူးခြားခြား လက္ခဏာ (၃) မျိုး…
“မိန်းကလေးတစ်ယောက် ပြောင်းလဲသွားမှ သစ္စာမရှိဘူး ဆိုတဲ့စကား ကြုံရာလူနဲ့ လက်ဆောင်မပါးပါနဲ့”
“မိန်းကလေးတစ်ယောက် ပြောင်းလဲသွားမှ သစ္စာမရှိဘူး ဆိုတဲ့ စကား ကြုံရာလူနဲ့ လက်ဆောင်မပါးပါနဲ့” မိန်းကလေးတွေ လိုချင်တာ ငွေကြေးချမ်းသာမှု မဟုတ်ပါ ဘူး … ။ သူတို့ဘဝကို နားလည်ပေးနိုင်သူရယ် လုံခြုံမှု ပေးနိုင်သူရယ်ပါ မိန်းကလေး ဆိုတာ အလိုလိုနေရင်း အားငယ်တတ်သူတွေပါ … ။ အဆင်မပြေချိန် စိတ်အားငယ်ရချိန်တွေမှာ သူတို့ ရင်ဖွင့်ချင်တာ သူတို့ ငိုကြွေးချင်တာ ချစ်သူ ရင်ခွင်မှာပါ … ။ ဒါပေမယ့် ယောက်ျားလေး အများစုက ချစ်တယ်လို့ ပြောပြီးရင် ပြီးသွားပြီ တော်ရုံ ဂရုမစိုက်တတ်ကြဘူး စိတ်မရှည်တတ်ကြဘူး မအားဘူး ဆိုတဲ့ စကားက သူတို့ရဲ့ ဆောင်ပုဒ်ပါပဲ … ။ ဂရုစိုက်မှု မရှိရင် အချစ်က အလကားပဲလေ ချစ်တယ်ပြောပြီး … Read more
သငျအိပျနတေဲ့ပုံစံကနေ သငျ့အကွောငျးကို မှနျအောငျပွောနိုငျတယျ…. သငျအိပျနတေဲ့ပုံစံကနေ သငျ့အကွောငျးကို မှနျအောငျပွောနိုငျတယျဆိုတာ သငျသိပါသလား။ ပုံမှာပါတဲ့အထဲက သငျဘယျလိုအိပျတတျလဲဆိုတာ ရှေးပွီး မှနျမမှနျကွညျ့လိုကျရအောငျနျော။ ပုံစံ(၁) တကယျလို့သငျဟာ ဒူးနှဈဖကျကို ဘေးဘကျသို့ ကှေးပွီးအိပျတတျတယျဆိုရငျတော့ သငျဟာ အေးဆေးပွီးတညျငွိမျတဲ့သူဖွဈပါတယျ။ သငျ့ကိုလှယျလှယျတိုကျခိုကျလို့မရသလို၊ သငျဟာ အနာဂတျကိုတှေးပွီး ကွောကျနတေတျတဲ့သူမြိုးလညျးမဟုတျပါဘူး။ သငျဟာ သငျ့ဘဝမှာဘယျလိုအခကျအခဲမြိုးပဲ ကွုံကွုံ အပွုံးမပကျြတဲ့သူတဈယောကျလညျးဖွဈပါတယျ။ ပုံစံ (၂) တကယျလို့သငျဟာ ကှေးကှေးလေးအိပျနတေတျတယျဆိုရငျတော့ သငျဟာ တဈခါတလမှော အားကိုးရှာတတျတဲ့သူဖွဈပွီး သငျ့အပျေါမှာ ကွငျနာပွီး၊ မတ်ေတာအပွညျ့ပေးနိုငျတဲ့သူကို တောငျ့တနတေတျ သူပါ။ နောကျပွီး သငျဟာ ပွသနာတှအေရှုပျအထှေးတှနေဲ့ ခပျဝေးဝေးမှာနခေငျြသူလညျးဖွဈပါတယျ။ သငျ့နဲ့အကိုကျညီဆုံးကတော့ ပနျးခြီ၊ အကနဲ့ စာရေးတာပဲဖွဈပါတယျ။ ပုံစံ (၃) မှောကျရကျအိပျတတျတဲ့သူဆိုရငျတော့ သငျဟာခေါငျးဆောငျတဈယောကျဖွဈပါတယျ။ သငျဟာ ဦးဆောငျနိုငျပွီး တှနျးလှနျနိုငျတဲ့အစှမျးရှိသူတဈယောကျပါ။ သငျဟာ အရာရာကို … Read more